Ukwakhiwa inqwaba umshayeli: isetshenziswa, iziphi izinhlobo imishini bangaphi labo abakumangalelayo?
Cishe zonke ukwakhiwa inqwaba enkulu umshayeli ezidingekayo. Kuyini, uyofunda kulesi sihloko. Nokho, kufanele kuphawulwe ngokushesha ukuthi imishini ekhona has a usayizi esikhulu.
Izici kanye nomklamo zedivayisi
Ngakho, umfanekiso wanoma umkhiqizo senziwa metal. Kuyinto isitshalo ukuthi isetshenziselwa inqwaba ukushayela ngesikhathi kwakhiwa. Mangisho ukuthi kuyaphumelela kakhulu, ngoba ezimweni ezinzima nezinye izinto zokusebenza zingahle zingasebenzi.
Koper (kuyini, wena ukuyichaza ke) Kufanele ube la izingxenye:
- isiteji (zungeza noma ukujikeleza) okungase kube ogibele ukwesekwa umile noma chassis evumela ukulihambisa bengonozulane;
- ngaphambili, okungaba umqhubi futhi wahlela yonke izinkinobho ezidingekayo futhi iziyisikhombisa yokulawula idivayisi;
- egunjini motor;
- insika phezu lapho isando ezihambayo, okhanda yinqwaba; phezu kwalo kufanele isethelwe yizimpahla amayunithi kanye headgear, lezi zinto banesibopho ukwehlisa futhi ngokuvuswa isando kusukela yinqwaba.
Umgomo we operation nezici imishini ukuphathwa
Koper (kuyini, siyatshelwa) kuyinto isimiso kahle elula. Ngakho-ke sebenzisa akunzima kakhulu. Okokuqala, kudingeka silungise inqwaba ukuze bakwazi pick it up bese udonsa endaweni lapho bazobuyekezelwa ivimbekile. izindlela eziningana ingasetshenziswa ukucwiliswa ingxenye:
Mangisho ukuthi inqwaba umshayeli inqwaba ukushayela ungaba ezahlukene boom eziphakeme. Inani obuyisilinganiselo 23 amamitha.
Okwakushiwo "inqwaba umshayeli" kakade, manje udinga ukubhekana kanjani ukusebenza lamasu. Ngomqondo onabile, akukho inkinga uma usuqedile ngedivayisi umshini. Nokho, umsebenzi wokwakha copra kufanele umuntu isidlulile izifundo ezikhethekile futhi isitifiketi eqinisekisa ukuba khona namakhono okuphatha, imishini yalolu hlobo. Futhi, sicela uqaphele ukuthi ngesikhathi ukusetshenziswa izinto ezifana zonke imithetho yokuphepha kufanele kuqashelwe ngokuqinile.
Ukuze ulawule divaysi isebenzisa iziyisikhombisa noma izinkinobho, okuyinto zitholakala abanikeze asebenza nabo. Phakathi umkhiqizo umsebenzi abantu babe akufanele eduze insika.
Izindawo ukusetshenziswa imishini
Ngomqondo onabile, kusebenza kuphela ukwakhiwa copra enqwabelanisa. imishini ezisetshenzisiwe ahanjiselwe ukwakhiwa izakhiwo ku sezwe kunzima, lapho kungase kube nokudilika kwenhlabathi. Kulokhu inqwaba bangaba avimbekile njengoba mpo ngokuqinile noma yomumo.
Ngosizo kule divayisi kalula ukwakha isisekelo, ufake izimpawu zomgwaqo noma ukukhangisa izakhiwo, izigxobo zikagesi, ukuqinisa ngezizathu ababuthakathaka, uma ukwakhiwa Kwenziwa loMfula imifula noma eduze amawa.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi umshini abakwazi kuphela amaphuzu, kodwa futhi ukudonsa inqwaba. Lokhu imishini ilungele kulo msebenzi wokwakha.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Ukwahlukaniswa kumadivayisi enikeziwe kunalokho nzima. Koper (ukuthi luyini lolo leli thuluzi, ukuyichaza ke) ingahlukaniswa ku nemingcele ezifana:
1. ngu ukwakhiwa hlobo:
- futhi nge insika umile enalokho kuthambekela;
- Simple (abe lwemidlalo ezinzima futhi efakwe emsamo zungeza);
- ezikhethekile (zingahlangana imisebenzi eminingi).
- self ezinezinjini (Ungahambisa ngokuzimela Yiqiniso, uhla nesivinini ukunyakaza incike igiya egijima, ibanga womoya inqwaba abashayeli Ungahambisa);
- mobile (hambisa badinga ngosizo nethonya).
3. igiya egijima:
- abakhasi (ziziphilela mobile hhayi afune izinto ngenkani kwabanye ezingeni ebusweni);
- relsokolesnye (kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe uma kwenzeka ukuthi ogandaganda kuzosetshenziswa), leli washi kukwenza kungenzeki ukuhambisa olude;
- womoya (esheshayo futhi beshesha kakhulu).
Manje uyazi ukuthi kungani kukhona umshayeli inqwaba, kuphi futhi kanjani it esetshenziswa, futhi iziphi izinhlobo Izinqubo. Ngikufisela inhlahla!
Recuperator emoyeni: kokufaneleka, ezihlukahlukene kanye nokukhiqiza izici
Khonka "Rotband": ezibekiweko lobuchwepheshe
Cleaner wezindlu nge esitsheni uthuli. Indlela ukukhetha hhayi ezokuzwisisa?
Amaphayiphi amanzi supply - kusukela metal amapayipi epulasitiki kanye noHezekeli
Imishini negesi Boiler: imishini, ukwakhiwa, ukufakwa
Kungani lokhu kubaluleke kangaka zokufaka amanzi ngamamitha?
Conjunctivitis ezinsaneni: izimbangela, ukwelashwa nokuvinjelwa
Indlela ukudonsa iketango phezu Vaz-2107 ngezandla zakhe
Okusho Ching hexagram. Sokuqonda Encwadi Izinguquko hexagram
Ngalolo carp catch ukubamba inhlanzi enkulu
Smartphone ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KG 8GB: ukubuyekezwa, ukubuyekeza
I-drill ye-ceiling - ngaphandle kwayo
Indawo ezamasiko - YaseMoscow cinema "Pushkin"
Ukulimala Ezemidlalo: iqakala umsipha ukudabuka
Umsuka larkspur: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications
Conditioner Daily - indlela izinwele enempilo